Showing ५१-६० of ९,२८८ items.
मिस स्टेट २०१८ र पूर्वाञ्चल सिङ्गिङ स्टारको तयारी पूरा
बरगाछी/ पूर्वाञ्चल बागिना कला केन्द्रले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको मिस स्टेट २०१८ र पूर्वाञ्चल सिङ्गिङ स्टारको फाइनल नजिकिदै छ । आउदो शनिबार धरानको सभागृहमा हुने मिस स्टेट २०१८ का सहभागीहरु अन्तिम चरणको प्रतिस्पर्धाका लागि पुर्ण तयारी अवस्थामा रहेको पूर्वाञ्चल बागिना कला केन्द्रका अध्यक्ष तथा कार्यक्रम संयोजक भक्तिराज राईले बताए । मिस स्टेटमा प्रदेश नं. १ का विभिन्न जिल्लाका १३ जना सुन्दरीहरु बिच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । मिस स्टेटका सहभागीहरुलाई विभिन्न प्रशिक्षणहरु दिई प्रतिस्पर्धाका लागि तयारी गरिएको छ । जसमध्ये उद्घोषण कला सम्बन्धी सञ्चारकर्मी तीर्थ कार्कीले प्रशिक्षण दिइका थिए । यसैगरी महिल
प्रकाशित मितिः मंसिर १२, २०७५
प्रहरी हवल्दार पक्राउ
विराटनगर/विराटनरसँग सिमा जोडिएको मोरङको कटहरी गाउँपालिका–१ महेशपुरमा सोमबार राति मादक पदार्थ सेवन (मापसे) चेकजाँचमा खटिएको प्रहरीमाथि नै जाइलाग्ने बहालवाला प्रहरी हवल्दारलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेका प्रहरी हवल्दार सबदनारायण चौधरीलाई निलम्बन गरी कारबाही अघि बढाएको छ । उनीसहित तीन स्थानीय पक्राउ परेका थिए । चेकजाँचको क्रममा स्थानीय र प्रहरीबीच झडपको स्थिति सिर्जना भएको थियो । चौधरी सोही ठाउका हुन् । उनले पनि प्रहरीको काममाथि सहयोग गर्नुको सट्टा स्थानीयलाई सहयोग गर्दै प्रहरीमाथि हातपात गरेको अभियोग लागेको छ । उनीसहित कटहरी–१ का ४५ वर्षिय अनन्तराम चौधरी र ५५ वर्षिय जोगनारायण चौध
नक्कली कम्पनी खोली ठगी प्रकरण : ओझालाई खोज्दै प्रहरी
विराटनगर/विराटनगरमा तीनवटा घर भाडामा लिएर नक्कली विद्युत्त परियोजना र विजनेस मेनेजमेन्ट ग्रुप खोलेर ठगी धन्दा चलाउने गुणराज ओझालाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालित भएको छ । ओझाबाट ठगिएका ५० भन्दा बढी कर्मचारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा मङ्गलबार ठगी मुद्दामा उजुरी दिएपछि उनलाई खोज्न प्रहरी परिचालित भएको हो । मोरङको लेटाङ घर बताउने उनी विराटनगर–४ स्थित जमुनगाछीमा ससुराली घरमा बस्दै आएका थिए । केही दिनअघिसम्म विराटनगरमा खुलेआम हिड्ने उनी कर्मचारीले उजुरी दर्ता गरेको खबर प्राप्त गर्ने बित्तिकै फरार रहेका छन् । प्रहरीमा उजुरी दर्ता हुनुअघिसम्म ओझाले ज्यानमार्ने धम्कीसम्म दिँदै आएका थिए । प
विषालु च्याउ खाँदा ४ वर्षीया बालिकाको मृत्यु, ४ बिरामी
ओखलढुंगा / सुकाएर राखेको विषालु च्याउ खाँदा ओखलढुंगामा एक बालिकाको ज्यान गएको छ । मृत्यु हुनेमा स्थानीय ग्यालु शेर्पाकी ४ वर्षीया छोरी निमायाङ्जी शेर्पा रहेको प्रहरीले जनाएको छ । सुकाएर राखेको च्याउ पोलेर खाँदा बिरामी परेकी शेर्पाको सोमबार मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक राजिप श्रेष्ठले बताए । विशालु च्याउ खाँदा अन्य ४ जना गम्भीर बिरामी परेको प्रहरीले जानकारी दिउको छ । प्रहरीका अनुसार बर्खामा जंगलबाट ल्याएर सुकाइएको च्याउ शेर्पा परिवारले पोलेर खाएका थिए । च्याउ २८ वर्षीय ग्यालु शेर्पा, उनकी श्रीमती ३० वर्षीय लकी शेर्पा, छोरा ७ वर्षीय पासाङ शेर्पा भतिजी ७ वर्षीय पोसी शेर्पाले खाएका थिए । उनीरु पनि
प्रकाशित मितिः मंसिर ११, २०७५
सुगुर पालेर मालामाल
इटहरी । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा कृषि क्षेत्रमा आकर्षित भएका छन् । विदेशको जस्तै स्वदेशमा पसिना बगाए प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिने देखेपछि पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाले कृषि क्षेत्रमा राम्रो आम्दानी गर्न थालेका हुन । फेमिली कृषि फर्म खोलेर सुगुरका पाठापाठी बिक्री गर्न कुनै समस्या नरहेको रामधुनी नगरपालीका ७ पन्चयानका युवा कुषक चक्र बाहादुर राईले बताए । वर्षको चार पटकसम्म सुगुरले एक पटकमा १२ देखि १६ वटासम्म बच्चा जन्माउने गरेको राइको भनाई छ । उनी भन्छन् कृषिमा भविष्य देखेर सुगुरको फर्म खोलेको बताउँछन । बैदेशिक रोजगारीका लागी सिगांपुर वसेका राई अहिले जिल्लाको सफल कुष
१,४७० पटक पढिएको
अपाङ्ग बालकलाई देउसी खेलेर नगद सहयोग
जिरोपोइन्ट/ धरान–४ भर्लेनी युवा क्लबले देउसीभैलो खेलेर सङ्कलित रकममध्ये केही रकम अपाङ्ग बालकको उपचारका लागि सहयोग गरेका छन् । क्लबले सोही ठाउँका अपाङ्ग बालक डेनियल मगरलाई उपचारका लागि १५ हजार ५ रूपैयाँ सहयोग गरेको हो । क्लबले डेनियलका अभिभावकलाई रकम हस्तान्तरण गरेको थियो । ती बालक हिड्न, बस्न, बोल्नसमेत सक्दैनन् । त्यसक्रममा धरान–४ का वडासदस्य गोरसमान आलेले पनि १ हजार ५ रूपैयाँ सहयोग गरेका थिए । स्थानीय समाजसेवी सोमी राईले पनि ५ सय ५० रूपैयाँ सहयोग गरे । क्लब अध्यक्ष प्रकाश मगरले अपाङ्ग बालकको उपचारमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले रकम प्रदान गरिएको बताए ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई ब्ल्याङ्केट
बिर्तामोड/जेष्ठ नागरिक मिलन समाज अर्जुनधाराले नगरका बिपन्न ज्येष्ठ नागरिकलाई ब्ल्याङकेट वितरण गरेको छ । नगरभरी रहेका अति बिपन्न ज्येष्ठ नागरिक मध्ये ६१ जनालाई आइतबार ब्ल्याङकेट वितरण गरेको हो । झापामै ज्येष्ठ नागरिक संस्थामध्ये सक्रिय अर्जुनधारामा रहेको समाजले बिगतका बर्षदेखि नै जाडोबाट जोगाउनका लागि बिपन्न समुदायका ति जेष्ठ नागरिकलाई कपडा तथा ब्ल्याङकेट वितरण गर्दै आएको छ । नगरका ११ वटा वडाका जेष्ठ नागरिकलाई ब्ल्याङकेट वितरण गरिएको समाजका अध्यक्ष रामप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । समितिका वडा संयोजकले छनौट गरेका जेष्ठ नागरिकलाई एक समारोहका बीच ब्ल्याङकेट बाँडिएको उनले बताए ।
८५ युनिट रगत सङ्कलन
उर्लाबारी /हाम्रो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड उर्लाबारीले सोमबार २३ औं स्थापना दिवसका अवसरमा रक्तदान तथा सम्मान कार्यक्रम गरेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उर्लाबारीको प्राविधिक सहयोगमा भएको रक्तदानमा ८६ युनिट रगत सङ्कलन भएको छ । यसैबीच उर्लाबारीका अग्निपीडित भक्तिराम अधिकारीलाई १५ हजार आर्थिक सहयोग गरिएको संस्थाका कोषाध्यक्ष एवम् कार्यक्रम संयोजक मुक्तिनाथ दहालले बताए । सहकारीको उत्कृष्ट समाचार प्रकाशित गरेको भन्दै पूर्वज्योति साप्ताहिकका सम्पादक जगन्नाथ भट्टराईलाई सम्मानित गरिएको छ । यसैगरी संस्थामा शेयर सदस्य वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने उर्लाबारीका राजेन्द्र कार्की र बलराम दाहाललाई प्रश
असारमायाले पाइन् नयाँ जीवन
धनकुटा/ आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न नसकी पाठेघरसम्बन्धी जटिल रोगले थलिएकी धनकुटाकी असारमाया राईलाई उपचारपछि मङ्गलबार धनकुटाको मूलघाटस्थित वृद्धाश्रममा राखिएको छ । धनकुटा साँगुरीगढी गाउँपालिका–४ उखु डाँडाकी ६५ वर्षीया राईको गत कार्तिकमा धनकुटा अस्पतालमा सञ्चालित शल्यक्रिया स्वास्थ्य शिविरमा पाठेघरको निःशुल्क उपचार गरिएको थियो । शल्यक्रियापछि एक महिनासम्म जिल्ला अस्पताल धनकुटाको निगरानीमा राखेर उनलाई मूलघाटस्थित वृद्धाश्रममा बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको शिविर व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिका संयोजक तथा समाजसेवी रोशेष श्रेष्ठले बताए । असारमायाले लेउतीखोलाको किनारमा सानो छाप्रोमा बसी ब
रेडियाेकर्मी माथि बोतल प्रहार
धरान / युवाहरूको एक समुहले धरान २० स्थित चिण्डेडाँडाबाट फर्कदै गरेका रेडियाे धरानका बजार व्यवस्थापक विकी श्रेष्ठलाइ सोमबार साँझ आक्रमण गरेका छन । सोमबार वेलुकी सवा ८ वजे धरान १३ स्थित झोलुङे पुल छेऊमा ७ ।८ जनाको नचिनेका युवाहरुको समुहले पछाडिबाट आक्रमण गरेको रेडियो धरानका स्टेशन मेनेजर शिशिर राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार उद्यमशील वचत तथा ऋण सहकारी सस्था लिमिटेड धरानको वार्षिक साधारण सभाको धरान २० स्थित चिण्डे डाँडाबाट समिक्षा कार्यक्रम सकेर फर्कने क्रममा श्रेष्ठमाथि एक्कासी पछाडीबाट आक्रमण भएको हो । उती युवाहरुले वियरको वोतल प्रहार गरेका थिए । वोतल प्रहारबाट श्रेष्ठको टाउ
प्रकाशित मितिः मंसिर १०, २०७५
२,१७१ पटक पढिएको